Ousmane Dembele oo xiiso cusub ka helaya mid ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan qaaradda Yurub – Gool FM
Haaruun May 30, 2020
(Barcelona) 30 Maajo 2020. Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Barcelona ee Ousmane Dembele ayaa lagu soo waramayaa inuu u yahay bartilmaamedka cusub ee kooxda Liverpool.
In kasta oo lala xiriirinayay kooxda Ingiriiska ah saxiixa Timo Werner tan iyo bilowgii sanadkan, haddana waxaa si weyn loo hadal hayaa in hoggaamiyeyaasha Premier League aysan u dhaqaaqi doonin weeraryahanka RB Leipzig xagaagan 2020.
Si kastaba ha ahaatee, iyadoo la filayo in dhowr meelood laga baxo, Jurgen Klopp ayaa la filayaa inuu isku dayo inuu keeno ugu yaraan hal waji oo cusub inta lagu jiro suuqa kala iibsiga ee soo socda, sida laga soo xigtay 90 min.
Sidaas darteed Reds waxay beegsaneysaa Dembele, kaasoo ay Barcelona suuqa dhigi doonto sida la fahansan yahay kaddib wada hadalo kala duwan oo ka dhacay Camp Nou.
Inkastoo xiddiga heerka caalami ee dalka France uu u dhaliyay 19 gool kooxda Barca, 17 kalena uu caawiye ka ahaa isago ka soo muuqday 74 kulan , 23 jirka ayaa waqti aad u badan ku qaatay dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray awgood.
Iyadoo Barcelona ay door bideyso inay lacag kaash ku iibiso Dembele, mas’uuliyiinta kooxda ayaa laga yaabaa inay albaabada u furaan heshiis amaah ah oo kooxdii qaadaneysa ay waajib ku tahay inay dhameystirto heshiiska joogto ah sannadka 2021.
Si kastaba, xiddigan ayaa kooxda Barcelona wuxuu kaga soo biiray naadiga Borussia Dortmund sanadkii 2017, tan iyo xilligaasna waxaa fursadihiisa soo koobay dhaawacyo tiro badan oo sabab u noqday inuu mustaqbalkiisa mugdi weyn galo.